Kubata hove nerubatsiro rweWheelchair
Kubata hove kune wese Munhu
Kubata hove kunogona kuve kwemunhu wese uye kunosanganisira vanhu vakaremara nekuti mutambo wekuredza wave unochinja kune vanhu vakaremara uye wave wiricheya akasungwa. Kana iwe ukashandisa kuenda kunobata hove usati wave remara ipapo unoziva kunakidzwa kwazvingaite uye unogona kuramba uchibuda woenderera mberi nekutenda kune adaptive midziyo. Sezvo zvave kufambira mberi kune yakawanda huwandu hwe midziyo iyo iwe yaunogona kushandisa kukubatsira iwe kuenda kunoredza. Kubata hove kunogona kuitwa chero kupi zvako asi iwe unofanirwa kugara uchifunga mupfungwa dzako dzimwe nyika dzine mitemo nemirau yakasiyana kana zvasvika kune mhuka dzesango.
Kutanga Zvinhu Zvokutanga
Paunofunga nezvekuredza iwe unofungidzira sei? Fungidzira iwe pachako uchiredza sekunge iwe usiri wiricheya yakasungwa
kana uchigona hove pamwero waunoda. Iyo adaptive michina inobvumira izvo nekuti zvese zvinotsigira kufamba kwako zvichienderana nezvaunowana. Sezvo pane zvidimbu zvakasiyana zve zvishandise angaita mazana emakore kuti avape mazita ese. Isu tichazongodoma mashoma emuenzaniso.
Simba Rakasimba, gomo, ruoko rutsigiro, mubati wedanda.
Iyi ingori mienzaniso mina kunze kweiyo zvakasiyana siyana izvo zvinopihwa. Unogona kuwana zvakawanda zveizvi paAmazon kana mamwe mawebhusaiti ayo anotengesa hove midziyo. Isu takapa zvinongedzo kune yega yega kuitira kana iwe usina kuziva kuti ungatenga sei imwe online. Kana iwe uine nzvimbo yekutengesa hove
iwe unofanirwa kuripa kushanya uye ona kana vaine chero chinhu chingave chekushandisa. Tsvaga iyo dzakasiyana mitemo nemirau zvinoenderana nedunhu rako uye uve nechokwadi chekuti hapana chauri kuita zvisiri pamutemo. Kune chikamu chikuru, kana iwe uchida rezinesi mubhadharo unowanzo kuve wakasununguka asi kana usina kusununguka saka unongova mubhadharo mudiki waungakwanise kubhadhara.
Mabhoti ingangove iri nzira yakanakisa yekutanga nekuti iwe une yakawanda yegungwa yauinayo. Enzanisa icho chiitiko chevezera rako uye ruzivo rwechikepe chingakurira zvakanakira iwe kana ukasawana
kurwara mugungwa. Unogona kukwereta chikepe asi chokwadika, iyoyo ingava mari zhinji kutoti iwe uine izvozvo mhando yemari. Imwe sarudzo yako yakanaka ndeyekubhadharira rwendo rwekuredza hove pachikepe chemumwe munhu kunze kwekunge ivo vachikurega uchirova yemahara izvo zvingave zvisingaite.
Rally boka pamwechete nekuti kuenda kunoredza wega kunogona kukunetesa sezvo nguva zhinji iwe wakamirira kuti hove dzikweve. Ukaenda neshamwari dzako kana mhuri zvinokupa vakomana nguva yakawanda yekushamwaridzana uye kubatana nekuda kwekuzorora kwese. Tora tumwe tudyo kana pamwe redhiyo kana mutauri kuti uteerere kune mimwe mimhanzi yekuteerera iwe uchidzikira muhove yako yekutanga.
Kuvaka Yako Yega Movie Kuunganidzwa
Zviitiko zveWheelchair Bound Vana